एउटै गोत्रमा विवाह किन गर्न हुँदैन? शास्त्रमा के छ ? हेर्नुहोस् यस्तो छ कारण – Wow Sansar
मुख्य पृष्ठ /Intresting/एउटै गोत्रमा विवाह किन गर्न हुँदैन? शास्त्रमा के छ ? हेर्नुहोस् यस्तो छ कारण
पहिलो मानव को होला ?